Sida loo Jawaab iyo Samee Wicitaanada Phone on Apple Watch
How to Make Apple Watch Phone Calls Without iPhone
1 Check out this article which includes complete information about How to Answer and Make Phone Calls on Apple Watch Without Pairing to iPhone.
2 Jawaabay Call a on Apple Watch
3 Samaynta Call a on Apple Watch
4.1 Inbadan oo ka socda goobtayda
Check out this article which includes complete information about How to Answer and Make Phone Calls on Apple Watch Without Pairing to iPhone.
Weligaa adigu ma fahmi maalintii iman lahaa marka aan si toos ah u wici kartaa qof ka cumaacumaha our? Iyadoo aan loo eegin waxa ay u muuqataa alaabtii in Sayniska-fi laga sameeyey, si kastaba ha ahaatee aad awoodid, dhab ahaan, sameeyaan iyo aad u hesho taleefan on Apple Watch. On Apple Watch, wicitaannada waxaa la hubiyeen dhex iPhone, weli aad ka jawaabi kartaa xitaa aad iPhone qol kale ama qarinaayay ee jeebka, siday on dood oo dhan si toos ah uga watch.
Jawaabay Call a on Apple Watch
Halkaa marka ay marayso marka call ku yimaado, waa in aad si fudud u taabo button cagaaran jawaab. Haddii ay dhacdo in aad jeclaan lahaa in aan ka jawaabo, aad ku sawirnaa badhanka hoos cas iyo call si ay fariin cod ah u diri.
Waxaad sidaas oo go'aan ka gaari karaan in ay ka jawaabaan hab aad iPhone ama idinku soo diro farriin dumaya. Halkaa marka ay marayso marka call ku yimaado, jeedin Crown Digital ama dadban ku kor si aad u hesho in fursadahan.
Haddii ay dhacdo in aad ku jirto kulan ah ama guud ahaan mashquul iyo dayacaad si degan aad Apple Watch hore, aad si degdeg ah aamuseen karaa dhawaaqa call dhaw by daboolaya Display Watch Apple ee timirta ahaa oo gacantaada saddex seconds. At tuubada dhibic in si xaqiijinayaa in xasilloon awood.
Samaynta Call a on Apple Watch
Waxaad samayn kartaa telefoonada dadka liiska Favorites by riixaya badhanka Side hoose Crown Digital ah. Halkaa marka ay marayso in, jeedin Crown Digital ama taabo xarfaha dad ah si ay u doortaan. Halkaa marka ay marayso in, Taabo astaanta call in salka uu ka tagay geeska ee shaashadda.
On fursad off ah in aad u baahan tahay in qof call oo aan aad liiska Favorites, ADIGANA codsiga Phone on Apple Watch ah oo u soo jeesan Crown Digital ama dadban si aad u hesho la xiriiri aad rabto inaad wacdo. Waxaad sidaas oo kale weydiin kartaa Siri in la sameeyo telefoon kuu by leh “Call” iyo magaca qof aad daraysid of xiriirada. Siri gelin doonaa telefoon aad u.
Ka hadalka ku saabsan Apple Watch ayaa dareensan in xoogaa aan caadi ahayn laga bilaabo, oo waa inaad u jirsadaa fogaan istiraatiji ka furan tan iyo markii ay u egtahay in ay adag tahay in laga soo afhayeenka Apple Watch maqlaan qof marka ay jiraan caadi ku xeeran. Aqbale hab Watch Apple la, kiis kasta, caadi ahayn waxtar leh ay dhacdo in aad u baahan tahay in ay ku sheekeyn qof oo aad iPhone ma aha dhow. Intaa waxaa dheer, aad ka jawaabi kartaa hab Apple Watch, qaado waqti aad sida ugu badan ee loo baahan yahay helitaanka in aad iPhone, iyo muhiimad beddelaan in ka badan marka aad diyaar u yihiin. Ma aha wax ku baaqay in dheeraad ah ku seegay.
Eeg maqaalkan oo ay ku jiraan macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan Sida loo Jawaab iyo Samee Wicitaanada Phone on Apple Watch Haddii aan ka garab si iPhone. Si fiican u akhri maqaalka oo raaci doonaa habraaca ku sharrax habka ay u jawaabay oo ku phone wacaan si fudud.
free inaad weydiiso su'aalo la xiriira this article isticmaalaya hoos ku Xusuuso sanduuqa comment Waxaad tahay. Oo booqo website downloadfacetime.com Wixii macluumaad dheeraad ah oo waxtar leh si joogto ah.
Inbadan oo ka socda goobtayda
Sida Loo Adeegsado Apple Watch ee Muusikada Aan Telefoon Lahayn
Sida loo rakibo oo loo isticmaalo Xilliga Mac
Filed Under: download Facetime Tagged With: Sida loo Jawaab iyo Samee Wicitaanada Phone on Apple Watch